सेयर बजारमा नेप्से परिसूचक ७ अंकले बढ्यो, होटल बाहेक सबै हरियाली — Imandarmedia.com
सेयर बजारमा नेप्से परिसूचक ७ अंकले बढ्यो, होटल बाहेक सबै हरियाली
काठमाडौँ । बुधबार सेयर कारोबार मापक नेप्से परिसूचक झिनो अंकले बढेको छ । नेप्से परिसूचक समग्रमा बढे पनि अधिकांश समूह घटेर राताम्मे देखिएका छन् । परिसूचक ७ दशमलव ०४ अंकले बढेर २ हजार ६८ दशमलव ४५ अंकमा पुगेको छ । उता ‘क’ वर्गका कम्पनीहरूको सेयर कारोबार मापन गर्ने सेन्सेटिभ इन्डेक्स भने १.२४ अंकले ओरालो लागेको छ ।
समग्रमा नेप्से परिसूचक बढेपनि व्यापार, होटल, विकास बैंक, हाइड्रोपावर, फाइनान्स लगायतका अधिकांश सब-इन्डेक्सहरु घटेर राताम्मे देखिएका छन् । बुधबार बैङ्किङ क्षेत्रको कारोबार २४ दशमलव २७ अंकले, जीवन बिमा ३९४ दशमलव ०७ र म्युचुअल फण्ड ०.०७ अंकले बढेका छन् ।
कारोबार रकम भने करिब ७ अर्ब नजिक देखिएको छ । दिनभर भएका ५१ हजार ३ सय २ वटा कारोबारबाट २०३ कम्पनीका १ करोड १५ लाख ५८ हजार ९ सय ९१ कित्ता सेयर किनबेच भएका छन् ।
जसअनुसार कारोबार रकम ६ अर्ब ८६ करोड२४ लाख ४५ हजार २ सय १५ रुपैयाँ पुगेको नेपाल स्टक एक्सचेञ्जले जनाएको छ । बुधबार धेरै कमाउनेमा नविल बैंकका लगानीकर्ता पहिलो नम्बरमा देखिएका छन् ।
नविल बैंकले गत आर्थिक वर्षको मुनाफाबाट ५१ प्रतिशत लाभांश दिने प्रस्ताव गरेको छ । यो बैंकहरूमध्ये सबैभन्दा धेरै हो । नविलको लाभांशका कारण पनि लगानीकर्ताहरू यता आकर्षित देखिएका छन् । यसको सेयर मूल्य आजमात्रै ९.९७ प्रतिशत अर्थात् १३५ रुपैयाँले बढेर प्रतिकित्ता १ हजार ४ सय ८९ रुपैयाँ पुगेको छ ।
आज फेरि सुनको मूल्य बढ्यो, कतिमा हुदैँछ नेपाली बजारमा काराेबार
आज नेप्से परिसूचक १५ अंकले बढ्याे, कारोबारमा नेपाल लाइफ अगाडि
सेयर बजारमा, नेप्से परिसूचक ५ अंकले घट्याे
सुन-चाँदीकाे मुल्य बढ्याे, प्रतितोला कति रुपैयाँमा हुँदैछ काराेवार
आज पनि सुनकाे मुल्य ताेलामा दुई सयले घट्याे, कति हुदैँछ काेराेवार
सुनको भाउ एकै दिनमा सात सय रुपैयाँले घट्यो, चाँदीकाे पनि सस्तियाे
आज सुनको मूल्य प्रति ४ सय रुपैयाँले बढ्यो कति रुपैयाँमा हुँदैछ काराेबार ?
मेगा बैंकको १० औं बार्षिक साधारणसभाबाट १३.०५ प्रतिशत लाभांश पारित
आजको सुनको मूल्य प्रतितोला ८ सय रुपैयाँले घट्यो कतिमा हुँदै छ कारोबार ?
आज ६ सयले बढ्यो सुनको मूल्य, कतिमा भइरहेकाे छ कारोबार ?